Gabadh agoon ah oo qoyskeeda dib ugu la midowday WhatsApp | Somalia News
Gabadh agoon ah oo qoyskeeda dib ugu la midowday WhatsApp
Xigashada Sawirka, Grace Umutoni
Gabar yar oo agoon ah oo waalidiinteeda ay ku kala dhumeen xasuuqii Rwanda ee sanadkii 1994-tii ayaa haatan dib u heshay xubnaha qoyskeeda, waxaana suurogeliyay arrintaas baraha bulshada.
Grace Umotoni oo xilliggaas 2 jir aheyd, xitaan ma aysan garaneyn magaceeda dhalashada, waxay bishii April sawiradeeda gelisay baraha bulshada sida WhatsApp, Facebook iyo Twitter-ka si ay u raadiso qaar kamid ah qoyskeeda, horraan waxay ku guuldareysatay inay dib ula midowdo ehelkeeda.
Gabadhan oo haatan 28 jir ah ahna kalkaaliso waxay kusoo kortay xarun lagu xanaaneeyo carruurta agoomaha oo ku taalla magaalada caasimadda ah ee Kigali iyada iyo walaalkeed oo afar jir ahaa kaas oo markii dambe geeriyooday.
Kumannaan carruur ah sida gabadhan Utomoni, waxaa qoyskooda iyo iyaga kala geeyay dagaalladii sokeeye ee ka dhacay Rwanda kaas oo ay ku dhinteen in ka badan 800,000 oo qof oo ka tirsan qowmiyadda Tutsi iyo dad ka tirsan Hutu oo loo arkay inay dhexdhexaad ahaayeen, dagaalkaas wuxuu socday 100 maalmood.
Qaar badan oo kamid ah dadkaas weli waxay ku raad-joogaan dadkooda.
Markii ay sawiradeeda gelisay barta WhatsApp, waxaa sawiradeeda arkay Antoine Rugagi, wuxuu la soo xiriiyay gabadhan oo uu u sheegay inay u egtahay walaashiis Liliose Kamukama, oo geeriyootay maalmihii ugu horreeyay ee uu xasuuqa billowday.
‘Mucjisadii aan ku duceysan jiray’
“Markii aan arkay sawirradiisa, waan isku ekaannay” Umutoni ayaa sidaas u sheegtay BBC-da qeybta la hadasho gobollada harooyinka waaweyn.
“Balse baaritaanka dhanka dhiigga hidda-sidaha ayaa lagu ogaan karaa in aan ehel naha, marka waxaan tegnay Kigali si aan arrintaas u sameyno.”
Ms Umutoni waxay kasoo safartay degmada Gakenke halkaas oo ay ka howlgasho halka Mr Rugagi uu kasoo dhaqaaqay degmada Gisenyi si ay isugu tegaan Kigali oo ay dhiigooda u baaraan.
Waxaana la xaqiijiyay inay ehel yihiin.
“Waan naxay, mana qiyaasi karin sida farxaddeyda ay maalinkaas aheyd, xitaa maanta waxaan u maleynaya in aan riyoonayo, waa mucjiso markasta aan ku duceysan jiray” ayay tiri Umutoni.
Ninkan ayaa noqday adeerkeed, wuxuuna u sheegay magaca gabadha qoyskood oo Tutsi ay u bixiyeen uu ahaa Yvette Mumporeze.
Wuxuu baray qoyska gaar ahaan aabaheed iyo wixii isaga la dhashay.
Waxaan kamid ahaa dadka uu baray Marie Josée Tanner Bucura, oo ah eedeed oo muddo bilooyin ah ku xayirneyd dalka Switzerland safmarka Korona awgii.
Ka hor inta labadooduba aan laga qaadin dhiigga hidda- sidaha ee DNA, waxaa eedadeed ka dhaadhacsaneyd in Grace Umutoni uu dhalay walaalkeed kaddib ay isku barbardhig ku sameysay labada sawir.
“Gabadha waxay uu muuqataa in uu dhalay walaalkey Aprice Jean Marie Vianney iyo dumaashidey Liliose Kamukama kuwaas oo lagu dilay xasuuqa”
‘Waxaan u maleynay in qofna uusan badbaadin’
Eedadeed Marie Josée Tanner Bucura waxay uga sheekeysay xaaladda qoyskeeda, xitaa waxay u sheegtay magaca walaalkeed ay iskula jireen xarunta agoonta oo horraan dhintay iyo in waaliddiintooda ay dhaleen canug lagu magacaabi jiray Fabrice oo hal sano dhallanaa xiligii xasuuqa.
Xasuuqa ayaa ka billowday Rwanda kaddib markii la soo riday diyaarad ay saarnaayeen madaxweyneyaasha Rwanda iyo Burundi kuwaas oo labadoodu ahaa Hutu 6-dii bishii April sanadkii 1994-tii, waxaana maalintii xigtay bilowday xasuuqa.
Maleeshiyaadka Hutu waxaa la faray inay laayaan qowmiyadda laga tiro badan yahay ee Tutsi. Duleedka deegaanka ku yaalla caasimadda ee Nyamirambo ayaa ahaa goobtii ugu horreysay ee la beegsado.
Waxaana la billaabay in la gumaado dadka iyadoo la adeegsanayo baangado, waxaana jidgooyooyin laga sameeyay waddooyinka si dadka aanay u baxsan, dadka qaar waxay ku carareen kaniisadaha iyo masaajidda ku yaalla Nyamirambo.
Xasuuqa ayaa soo afjarmay bishii July ee sanadkii 1994-tii markii koox fallaago Tutsi ah oo la oran jiray (RPF) ay la wareegeen awoodda, waxaana hogaaminayay madaxweynaha haatan ee Rwanda Paul Kagame.
“Waxaan u maleynay in aanay jirin qof badbaaday, waxaan sanad kasta sameyn jirnay baroor diiq lagu xusayo dadkii ku dhintay xasuuqa” ayay tiri Grace Umutoni eedadeed.
Markii ay weynaatay Ms Umutoni waxaa u suurogeli weyday inay hesho walaalkeed Yves Mucyo, waxaana loo sheegay in uu u dhintay dhaawac soo gaaray markii la toogtay isaga oo isku dayayo in uu ka baxsado maleeshiyaad Hutu ah.
Gabadhan markii ay afar jir aheyd waxaa xarunta ka qaatay qoys Tutsi oo korsaday kuwaas oo bixiyay magaca Grace Umutoni.
‘Waxaan ku noolaa murugo’
“Saraakiisha dugsiga sare ee aan wax ka dhigan jiray ayaa i caawiyay, waxay tegeen xaruntii agoonta ee Kigali ee aan kusoo koray si ay usoo helaan ehelkeyga” ayay tiri Grace Umutoni.
“Markasta waxaan ku noolaa xaalad murugo ah oo ku saabsan in aan garaneyn ehelkeyga balse waxaan Alle ka baryi jiray in uu soo dedejiyo mucjisada”
“Qoyskii isoo korsaday si wanaagsan ayay iila dhaqmeen xitaa ma dareemin in waaliddiintooda ay iga maqan yihiin”
Waxay ku rajo weyn tahay in maalin uun aqoonsato waaliddiineeda, qorshe lagu mideynayo qoysaskii ay kala geeyeen dagaallada ayaa la filayay in lagu qabto Rwanda balse waxaa dib u dhigay cudurka Koroona.
In dib ay ula midowdo ehelkeeda waxaa suurogeliyay WhatsApp-ka, xitaa waxay is barteen walaalkeed oo ku nool Kigali.
‘Waxaa mahadsan qoyskii soo korsaday’
Tan iyo sanadkii 1995-tii, ku dhawaad 20,000 qof uu badnaa carruur ayaa la midoobay qoysaskooda, waxaana arrintaasi fududeysay hey’adda ha’yadda laanqeyrta cas.
“Waxaan ka codsanaa dadkii ka badbaaday xasuuqa inay iska diiwaan geliyaan xarumaha lagu xanaaneeyo agoonta” waxaa sidaas BBC-da u sheegay afahayeen u hadlay ha’yadda.
Tan iyo sanadkan, Ha’yadda ICRC waxay qoysaskooda dib ula mideysay ilaa 99 qof kuwaas oo aan wax ah ka heyn qoysaskooda muddo 20 sano ah.
Mrs Bucura, waxay si weyn u bogaadisay dadaalka ah in dib loo helo gabadha ay eedada u tahay.
“Waxaan u mahadcelineynaa qoyskii magacan u bixiyay ee soo korsaday”
Waxaa farxad ii ah in qoyskii i dhalay iyo kuwii i soo koriyyayba ay labaduba i jecal yihiin”
Grace Umutoni waxay sheegtay in aysan iska baddeli doonin magacan ay u bixiyeen qoyskii soo korsaday.
Waxay sidoo kale ku faraxsan tahay in baraha bulshada ay u suurogeliyeen in dib ay ula midowdo qoysaskeeda.
“Haatan waxaa si joogta ah ula xiriira qoyskeyga, ehelkeyga, eedayaashey iyo walaalahey”
“Balse haatan waxaan dareemey in aan leeyahay labo qoys, qoyskii i dhalay iyo kuwii isoo korsaday”
This post first appeared on BBC Somali - Somali. Read the http://www.bbc.com/somali/war-54278089original article
Previous articleChelsea – Frank Lampard already under the spell of Thiago Silva
Next articleMuxuu Ka Codsaday Madaxweyne Waare Ra’iisal Wasaaraha Cusub Dalka?